ဟေ့ကုလားတွေ . . . . မင်းတို့ မွတ်ဆလင်အကြောင်းကို လေ့လာထားပြီး အချက်အလက်ခိုင်ခိုင်မာမာရှိတဲ့ ကိစ္စကိုပြောလို့ မင်းတို့ ဆတ်ဆတ်ထိမခံနိုင်ဖြစ်နေတာ။ မိုဟာမက်ဘယ်လောက်အထိ ယုတ်မာပြီး နှာဘူးထ တယ်ဆိုတာ Quran နဲ့ Hadith တွေမှာ အထင်အရှား ရေးထားတာ မင်းတို့အသိဆုံးပါ။ ဒါကြောင့် မင်းတို့ ဘာမှ မပြောနိုင်ပဲ စိတ်တွေတို၊ ဒေါသတွေထွက်ဖြစ်နေတာ။ မင်းတို့တွေဗုဒ္ဓဘာသာကို ရုပ်တုကိုးကွယ်တယ်၊ ကုလားဘုရား စတာနဲ့တော့ ငါတို့ကို စိတ်တိုအောင်လုပ်လို့မရဘူး။ ငါတို့ မွတ်ဆလင်ဘာသာကို လေ့လာပြီး မင်းတို့ကို ကောင်းကောင်း ထုနှက်သလို မင်းတို့လဲ ဗုဒ္ဓဘာသာကို လေ့လာပါ။ လေ့လာပြီး ဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့ မှားယွင်းချက်ကို ဝေဖန်တဲ့အဆင့်တင် မကဘူးနော် . . . ပယ်ပယ်နယ်နယ်စော်ကားစမ်းပါ။ အဲလောက်အထိကို စိန်ခေါ်ထားတယ်။ ဒီမှာနောက်ထပ် ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ် တင်ပေးထားတယ်နော်။
ဆောင်းပါးကို အလင်းစေတမန် ဘလော့မှ ကူးယူဖေါ်ပြပါသည်
မိမိသာလျင် မိမိကိုးကွယ်ရာဖြစ်၏ မိမိမှတစ်ပါး အဘယ်သူသည် မိမိကိုးကွယ်ရာဖြစ်ပါအံ့နည်း။ (မြတ်ဗုဒ္ဓ)
အကျင့်သီလကင်းမဲ့ခြင်းဖြင့် အသက်တစ်ရာနေခြင်းထက် အကျင့်သီလဘာဝနာ ပြည့်စုံစွာဖြင့် တစ်ရက်တည်းအသက်ရှင်၍နေခြင်းက ပို၍မြတ်၏။ (ဓမ္မပဒ-၁၀၃)
ကုသိုလ်ဖြစ်ခြင်း၏ အနီးဆုံးအကြောင်းသည် ယောနိသောမနသိကာရ ရှိခြင်းဖြစ်၏ အကုသိုလ်ဖြစ်ခြင်း၏ အနီးဆုံးအကြောင်းသည် အယောနိသောမနသိကာရရှိခြင်းဖြစ်၏။ မြတ်ဗုဒ္ဓ(အင်္ဂုတ္တိုရ်ဠိတော်)
မုသားဆိုရင် ရယ်ဖွယ်အဖြစ်တောင်မပြောနဲ့၊ လိမ်ဝံ့တဲ့သူမလုပ်ရဲသော အကုသိုလ်ဟူ၍ မရှိနိုင်တော့၊ မှောက်ထားသောရေခွက်မှာ ရေစက်တစ်စက်မှမကျန်သကဲ့သို့ လိမ်ဝံ့သူ၌ အရည်ချင်းကောင်းဟူ သမျှမရှိတော့။ (မြတ်ဗုဒ္ဓ)
သမင်သည်ပြည်တန်ပတ္တမြားကိုမြင်သော်လည်း တန်ဖိုးမသိသည့်အတွက် မြက်ကိုသာစားပြီး တောထဲဝင်သကဲ့သို့ ပညာမရှိသောလူသည် အလွန်အဖိုးတန်သော လူ့ဘ၀ကိုရသော်လည်း တန်ဖိုးမသိသည်. အတွက် ကာမဂုဏ်ကိုခံစားပြီး အပါယ်လေးပါးသို့သွားသည်။ (ဓမ္မပဒ)
၀တ္တုကာမဂုဏ်တွေနဲ့ မလိမ်းကျံတော့တဲ့သူ၊ ၀ဋ်ဒုက္ခအပေါင်းနဲ့ဝေးပြီးငြိမ်းအေးနေတဲ့သူ ကိလေသာ အဘိသင်္ခါရ ကာမဂုဏ် သုံးထွေသောတရားတို့ငြိမ်းပြီးတဲ့သူဟာ နေ့ညဉ့်ဆက်ကာ ကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာ ချမ်းသာစွာ အိပ်စက်ရပေတယ်။ (မြတ်ဗုဒ္ဓ)
သူတစ်ပါး အပြစ်ကို အဖန်ဖန်ရှုလေ့ရှိသည်ဖြစ်၍ အမြဲတမ်းကဲ့ရဲ့ ရှုတ်ချလိုသော အမှတ်သညာ ရှိနေသူအား အပါယ်လားကြောင်း အာသဝေါတရားတို့သည် တိုးပွားကုန်၏ ထိုသို့ သူတစ်ပါးအပြစ်ကို ရှာလေ့ရှိသောသူသည် အာသဝေါတရားကုန်ရာ အရဟတ္တမဂ်မှ လွန်စွာဝေး၏။ (ဓမ္မပဒ)
ချစ်သားဥဂ္ဂသေန…. ပညာရှိတဲ့သူဟာ အတိတ် အနာဂတ် ပစ္စုပ္ပန် ခန္ဓာတွေမှာဖြစ်တဲ့ တွယ်တာခြင်းတဏှာကိုပယ်စွန့်ပြီး ပဋိသန္ဓေတည်ခြင်းမှ လွတ်မြောက်ဖို့် သင့်လှပေတယ်။ (မြတ်ဗုဒ္ဓ)
တစ်စုံတစ်ယောက်သောသူသည် ဤခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုရထားပါလျက် ငါသည်အနာကင်း၏ ကျန်းမာ၏ ဟုဆိုသော် ထိုသူကား မိုက်မဲသူသာတည်း၊ ထိုကြောင့် သူကြွယ် ဤအရာဝယ်ငါသည်နာကျင်သောကိုယ်ရှိသူဖြစ်လျက် ငါ၏စိတ်သည် နာကျင်မူကင်းသည် ဖြစ်လတ္တံ့ ဟုကျင့်အပ်၏။ (မြတ်ဗုဒ္ဓ)
အကြင်ပုဂ္ဂိလ်သည် မြေကြီးကဲ့သို့သည်းခံ၏ ရွှံ့ညွန်ကင်းသော ရေကန်ကဲ့သို့ ကိလေသာမယှဉ် ကြည်လင်သောစိတ်ရှိ၏ တံတိုင်းကဲ့သို့ ခိုင်မာသော အကျင့်ရှိ၏ ထိုသို့သော ပုဂ္ဂိလ်အားသံသရာ၌ ကျင်လည်ခြင်းတို့သည် မဖြစ်တော့ပေ။ (ဓမ္မပဒ)
ရဟန်းတို့…တစ်ခုသောတရားသည်အင်္ဂါရှစ်ပါးရှိသောအရိယာမဂ်ကိုဖြစ်စေခြင်းငှာအကျိုးများ၏တစ်ခုသောတရားဟူသည်အဘယ်နည်း၊ ရဟန်းတို့ သင့်သောအားဖြင့်နှလုံးသွင်းခြင်း ယောနိသောမနသှိကာရနှင့် ပြည့်စုံခြင်းပေတည်း။ (မြတ်ဗုဒ္ဓ)
အာနန္ဒာ…..မိမိ၏မိတ်ဆွေများ ဆွေမျိုးဥာတကာများ ကိုမေတ္တာရှေ့ထား၍ သနားလိုကြပါလျင် ဘုရား၊ တရား၊ သံဃာ ရတနာသုံးပါး တို့၌ သက်ဝင်အောင်တိုက်တွန်းအပ်၏။ (အင်္ဂုတ္တရ်၊ တိကနိပါတ်၊ နိဝေသကသုတ်)
မင်းကြီး….အကျင့်သီလရှိမရှိကို ပေါင်းသင်းဆက်ဆံကြည့်မှ သိနိုင်၏ သီလစင်ကြယ်မကြယ်ကို ရှေ့စကားနှင့်နောက်စကား ညီညွတ်မူရှိမရှိကို ထောက်ချင့်၍ သိနိုင်၏ ဥာဏခွန်အားရှိမရှိကို ဘေးအန္တရယ်မှ လွတ်မြောက်အောင် စွမ်းဆောင်နိုင် မစွမ်းဆောင်နိုင် ကိုကြည့်၍ သိနိုင်၏ ဥာဏ်ပညာမပြည့်ဝလျင် မသိနိုင်ပေ။ (မြတ်ဗုဒ္ဓ)
ရဟန်းတို့ ….. ပေးကမ်းစွန့်ကြဲခြင်း စေတနာရဲ့အကျိုးကို ငါသိသလို သတ္တ၀ါများ သိကြမယ်ဆိုရင် ကိုယ်စားမဲ့ ၀တ္ထုထဲက သူတစ်ပါးကို မပေးကမ်းပဲ ဘာကိုမျှ စားနိုင်မည်မဟုတ်ပေ။ ကိုယ့်ပစ္စည်းကို မပေးရက်တဲ့ အကုသိုလ်စိတ်တွေလည်း သတ္တ၀ါတို့ကိုနှိပ်စက်နိုင်မှာ မဟုတ်ပေ။ (ဣတိဝုတ်ပါဠိတော်၊ဒါနသုတ်)
ပုဏ္ဏ…..အဆင်း၊အသံ၊ အနံ့၊ အရသာ ၊ အတွေ့အထိနှင့် စိတ်ဖြင့်ကြံစည်အပ်သော အထွေထွေအာရုံများကို သာယာစရာ နှစ်သက်စရာ အဖြစ်ဖြင့် တွေးတောကြံစည်သောသူအား သာယာနှစ်သက်ခြင်းဖြစ်ပေါ်လာ၏ ။ ပုဏ္ဏ သာယာနှစ်သက်ခြင်းဖြစ်လျင် ဆင်းရဲဒုက္ခဖြစ်ပေါ်၏ ဟုငါဘုရား ဟောကြား၏ ။ အဆင်း ၊ အသံ ၊ အနံ့ ၊ အရသာ ၊ အတွေ့အထိနှင့် စိတ်ဖြင့်ကြံစည်အပ်သော အထွေထွေ အာရုံများကိုသာယာစရာ နှစ်သက်စရာ အဖြစ်ဖြင့် မတွေးတော မကြံစည်သော သူအား သာယာနှစ်သက်ခြင်းသည် ချုပ်၏ ။ သာယာနှစ်သက်ခြင်း ချုပ်လျင် ဆင်းရဲ ဒုက္ခ ချုပ်၏ ဟုငါဘုရားဟောကြား၏။ (မြတ်ဗုဒ္ဓ)
နက္ခတ်ကောင်းကို စောင့်မျှော်နေသောလူမိုက်ကို ကောင်းကျိုးချမ်းသာများက လွန်မြောက်၍သွားကြ၏။ ကောင်းသောအလုပ်ကိုစလုပ်သော နေ့သည်ပင် ကောင်းသောနက္ခတ်ဖြစ်၏။ ကောင်းကင်မှာသွားနေသော နက္ခတ်များသည် အဘယ်အကျိုးစီးပွားကိုမှ ပြီးမြောက်အောင် ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်မည် မဟုတ်။ (ဧကနိပါတ်၊ နက္ခတ္တဇတ်)
ပုဏ္ဏား…..ကြမ်းတမ်းယုတ်မာ ဆဲဆိုလာသောသူကို သူမိုက်ကသာအောင်နိုင်သည်ဟု ထင်မှတ်၏။ အမှန်မှာထိုအောင်ပွဲသည် သူ့အတွက်မဟုတ်ပေ၊ ပညာဖြင့်ဆင်ခြင်၍ သည်းခံနိုင်စွမ်းသော အာဇာနည်ပုဂ္ဂိုလ်၏ အောင်ပွဲသာလျင်ဖြစ်ပေသည်၊ အကြင်သူသည် အမျက်ထွက်သောသူအား တုံ့ပြန်၍ အမျက်ထွက်၏။ ထို့သို့အမျက်ထွက်ခြင်းဖြင့် ထိုသူသည် ပထမ အမျက်ထွက်သူထက် ပို၍ယုတ်မာ၏။ အမျက်ထွက်သူကို တုံ့ပြန်ရန်မူခြင်း မရှိသောသူသည်ကားနိုင်ခဲသော စစ်ပွဲကိုအောင်သူဖြစ်၏။ (မြတ်ဗုဒ္ဓ)
လူများသည် ပညာမရှိသောသူကန်းများသာဖြစ်၍ ဤလောက၌ အနည်းငယ်မျှသောသူသာ အနိစ္စ၊ဒုက္ခစသောဝိပဿနာကိုပွားများနိုင်၏ မုဆိုး၏ပိုက်ကွန်မှလွတ်ထွက်သောငှက်သည် နည်းသကဲ့သို့သေသောသူတို့တွင် နတ်ပြည်သွားသောသူသည် နည်းလှ၏။ (ဓမ္မပဒ)
ကုသိုလ်ကောင်းမူတို့၌စိတ်ကူးကြံစည်ရုံမျှနှင့်ပင်လျင်အကျိုးကျေးဇူးများလှပေ၏ဟုငါဘုရားဟောတော်မူ၏။ကိုယ်ရောနှုတ်ပါပြုကျင့်ပါက အကျိုးကျေးဇူးများခြင်း၌ အဘယ်ဆိုဖွယ်ရာ ရှိပါတော့အံ့နည်း။(ဓမ္မပဒ)
ဒုက္ခချုပ်ငြိမ်းခြင်းဟူသော နိရောဓသစ္စာတရားသည် ကိုယ်တိုင်မျက်မှောက်ပြုအပ်သော တရားဖြစ်၏။ (ဓမ္မစက္ကပ၀တ္တနသုတ်)
ဖြစ်ပေါ်လာသောဆင်းရဲ ဟူသမျှတို့သည် သင်္ခါရဟူသောအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်၏ သင်္ခါရတို့ ချုပ်ငြိမ်းသွားလျင် ဆင်းရဲဖြစ်ခြင်းမရှိ။ (သုတ္တနိပါတ်၊ ဂါထာ-၇၃၇)
ရုပ်နာမ်ဓမ္မသင်္ခါရအားလုံးတို့သည် အမြဲမရှိကုန်ဟု ၀ိပဿနာပညာဖြင့်ရှုမြင်နိုင်သောအခါ ရုပ်နာမ်ဓမ္မသင်္ခါတို့၌ ငြီးငွေ့၏။ဤငြီးငွေ့ခြင်းသည် ကိလေသာစင်ကြယ်ရာ နိဗ္ဗာန်၏အကြောင်းဖြစ်၏။(ဓမ္မပဒ)
ခံစားမူမှန်သမျှသည် ဆင်းရဲခြင်းနှင့် ဆက်နွယ်လျက်ရှိ၏။ (သံယုတ်ပါဠိ၊ အာလာရသုတ်)
ဖြစ်ခြင်းသဘောရှိသော အရာခပ်သိမ်းတို့သည် ပျက်ခြင်းသဘောလည်းရှိကြကုန်၏။ (ဓမ္မစက္ကပ၀တ္တနသုတ်)
အားပေးတယ်ဗျာ..ကုလားကတော့ ငယ်ငယ်တည်းက တော်တော်မုန်းတာ
ကောင်းလိုက်တဲ့ ဘလောဂ်လေး..အားပေးတယ်ဗျာ.ကျုပ်တို့အားလုံး တက်ကြွစွာလုပ်ရင်..ဒီကောင်တွေဘယ်လိုလုပ် လူမျိုးရေး ၀ါးမျိုလို့ရမလဲ..မြန်မာ့အမျိုးကောင်း သမီးတွေ ဒီကောင်တွေကို သတိထားရမယ်၊ကိုယ် လူမျိုးမဟုတ်တဲ့ ကုလား ကောင်တွေနဲ့ မပတ်သတ်တာ အကောင်းဆုံးပါ ပဲ။ကျုပ်တို့လည်း ကိုယ်နိုင်သ လောက် ကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင်ကို ထိန်းသိမ်း သွားမယ်။